Google Assistant dia efa mampiseho ny interface vaovao ao amin'ny Pixel 3 | Androidsis
Google Assistant dia mizaha ny interface vaovao ao amin'ny Pixel 3
Eder Ferreño | | Fampiharana Android
Nandritra ny volana vitsivitsy dia nisy ny tsaho momba izany interface vaovao izay hampiasaina ao amin'ny Google Assistant. Ary farany, herinandro mahery kely izay dia azo atao ny mahita fa tena interface tsara ilay izy efa nanomboka ny fitsapana miaraka aminy. Ny orinasa dia manohy manandrana interface vaovao sy tsy dia manelingelina, amin'ity tranga ity amin'ny Pixel 3.
Ireo mpampiasa manana Pixel 3 dia nanomboka nahita ny fisehoan'ny interface vaovao rehefa mampiasa ny Google Assistant izy ireo. Io ilay interface tsara izay nanomboka nosedraina herinandro lasa izay. Ka ny orinasa dia miasa amina famolavolana toy izany, izay tokony hitranga tsy ho ela.
Ity interface vaovao ity dia mila toerana kely kokoa amin'ny efijery. Ny hevitra dia hoe rehefa nantsoina ny Google Assistant, satria mila zavatra isika dia tsy hibodo ny efijery iray manontolo, toy ny ankehitriny. Ny antsasaky ny efijery finday fotsiny no alainy. Ho an'ny maro dia mety ho zavatra ahazoana aina kokoa izy io raha ampiasaina.
Raha manana izany ny mpampiasa Pixel 3 sy 3 XL, tsy hahagaga raha hanitatra io interface io ao amin'ny magicien io atsy ho atsy. Mba hahafahan'ireo mpampiasa manana modely Google hafa mampiasa azy io. Na tsy misy voalaza aza hatreto.
Hatreto, Google dia mbola tsy nilaza na inona na inona momba ity interface vaovao ity ao amin'ny Google Assistant. Efa ela ny orinasa no namolavola azy, ary ankehitriny dia mandray andraikitra izy ireo manao andrana amin'ny findainy. Ka tsy tokony hiandry ela loatra isika mandra-pahatongany any amin'ireo mpampiasa amin'ny Android.
Na ahoana na ahoana, dia hitandrina isika mandefa vaovao an'ity interface vaovao nohavaozina ity. Ny fampiasana Google Assistant amin'ny telefaona dia tokony ho mora kokoa ho an'ireo mpampiasa amin'ity fomba ity, tsy dia manafika. Rehefa betsaka ny fantatra momba ny fanombohany, dia holazainay aminao izany momba izany ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Assistant dia mizaha ny interface vaovao ao amin'ny Pixel 3
OnePlus dia tsy manohy manolotra karazany roa amin'ny OnePlus 7 Pro amin'ny iray amin'ireo tsena lehibe indrindra eran-tany
Ny elanelan'ny Galaxy S11 dia hanana telefaona dimy